S E X Y | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » S E X Y
Posted by ဘဲဥ on Jan 28, 2013 in Copy/Paste | 32 comments
စာတွေချည်းဘဲ ဖတ်နေရတာ ပျင်းလာလို့ အအီပြေလေးဖြစ်သွားအောင်
မျက်စိပသာဒ လန်းဆန်းသွားအောင် (ခွက်ဒစ်တူ ဗိုက်ဗိုက်)
ကဲ ကဲ ဒီပိုစ့်ကို မကြည့်ခင်
ယခု ဖေါ်ပြပါ ဓါတ်ပုံများသည် ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးမှု စစ်စစ် လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ရဲရဲကြီးအာမခံပါသည် :harr:
အဲတာ ဘူလဲအင် အထုလေးတင် ပိုစ့်လေးထဲမှာ ပုံတစ်ပုံ တင်ဖို့ ကျန်ခဲ့လို့ ပြန်ပြင်ရင်းတွေ့လို့
ဘူများလဲလို့ အပြေးအလွှား လာကြည့်တာ ….
အိန်အိန်း VCD ထဲက
အင်း .. ဖွဘုတ်မှာလည်း ပလူပျံနေတာပဲ … ။
ဒီထက်ပို ပြီး ပိန်ပိန် ပါးပါးလေးဆို ကြည့်လို လှမလားပဲ …. ။
အိန်အိန်း ရဲ့ မင်းနဲ့ ချစ်တာပါ သီချင်းထဲမှာတော့ .. ဝက်ပေါက်လေးလိုပဲ ..ပုတက်တက် လုံး တုံး တုံး နဲ့ …….. အဟိ …. ။
ုပြသာ ပြနေတာ ဂလောက်ကြီး အထရက်ရှင် မချိလှဘူး .. ခိခိ … ။
ဂလု … ဂလု … ဂလု …
(ဂယ်ဒေါ့ မစားရ အညှော်ခံဘာအေ …)
ခုတော့ မျက်လုံးလည်း ပုဇွန်မျက်လုံးဖြစ်ပြီ….
ရေငတ်လာလို့ သောက်ရတာလည်း တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်…
ဟီး ဟီး လျှာလည်းကိုက်မိမှာစိုးလို့ အပြင်ကိုထုတ်ထားရတယ်…
အိန်အိမ်း ဗီစီဒီထဲက ဒီကောင်မလေး တင်ပြချက်တွေ အတော်လန်းတယ်… Sexy Art ဆိုဘဲ သူရို့ဒွေပြောတာ
ပုဝါအနီ ပတ်ထားတဲ့ ပုံကို ရွှံလိုက်ထှာ…….
အမေဒိကန် အလံအစား မြန်မာပြည်အလံလေးနဲ့ဆို ဘယ်လိုနေမယ်သိဘူး။ :hee:
ဒါလေးများ ဒါလေးများ တူနှယ်တယ်နှယ် တယ်နှယ်
အော် အနိစ္စ ..
နိုင်ငံခြားက အတုယူသင့်တာ ကိုတော့ အတုမယူဘဲ ဒါမျိုးကျမှ လာအတုယူနေတယ်။ နန်းခင်ဇေယျာ ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ပေမယ့် ပွဲကြောင့်ဝတ်ရတယ်ဆိုတာ သိနေလို ့ပဲလားမသိ အမြင်မရိုင်းဘူး။ သူက သက်သက်မဲ့ စက်စီလုပ်နေတာ ရွံဖို ့ကောင်းတယ်။
ရွှံ.ချာကောင်းထာအေ……….. ထမင်းချားပျက်ဒယ်……. ဟိဟိ
ဟဲ ့………ကလေးဒွေ ဘေးဖယ်ကြဇမ်း !!!!!!
လူဂျီးဒွေ လာဒေါ ့မယ် … လမ်းရှင်းထားဂျ ….
……………ိန စ စစစစစစစစစစစစစစစစစစ
အိန်း အိန်း……….လောဘ ဒေါသ မောဟ..အနိစ္စ….ဒုက္ခ…အနတ္တ….။ အိမ်ကဟာကြီးနဲ့များကွာလှ လို့ ပြောတဲ့လူဘယ်သူများရှိမလဲမသိ..။
အော် ဘွဲဥရယ် ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ဘဲ ကျေနပ်နေရတော့တဲ့ ဘွပေါ့နော် အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာဟယ် :harr:
ဘဲဥ မ … ညည်း Mg Satan ကြည့်သလားအေ့ .. :buu:
ဦးမာဃ သားတော်မောင် ဒါမျိုးတွေ မမြင်ပါစေနဲ့ကွယ်
မောင်နှင့်နှမ သားနှင့်အမိ မျက်စိရှက်စရာ
ငါ့ နတ်သမီးတွေပဲ ကျက်သရေရှိတယ်
ဖင်ကြီးပြောင်နေတဲ့ သငယ်မလေးကို ဘောကျချင်တယ်
ဒီပို ့စ်ထဲ ပါသမျှ အားလုံးကို ကြိုက်တယ်
ဟဲ့ဟဲ့ အမောင်ဘဲလဥ ဘယ်လိုပုံတွေများတင်လိုက်သလဲကွယ်
အဲ့ဒီလိုပုံတွေက မကြည့်ရဘူးကွဲ။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဂါ မျက်စီကတစ်ဆင့်
မြင်သိစိတ်မှာ ဒီလိုကိလေသာပွားမယ့်ပုံတွေ မြင်ပြီး နှစ်သက်ရင်လောဘ
မနှစ်သက်ရင်ဒေါသ ဆိုပြီးကိလေသာတွေဝင်တတ်တယ်။ မြင်ရင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့
သဘောကိုသိမှ အဲ့ဂလိုမှမဟုက်ရင် ဘာကိုမြင်တယ် ဘာကိုမြင်တယ်ဆိုပြီး
ပစ်ညက်တွေမှာသွားတင်မိရင် ခက်တော့ဒါပါပဲကွယ် မန်းဂေဇတ်က ကိလေသာ
ထူပြောပြီး တဏှာဇေားကပ်နေတဲ့ မောင်တွေဒုတ်ခတွေတော့ ရောက်ကုန်တော့မှာပါပဲ။
ကျုပ်ဆိုတဲ့ မောင်ရင်မိုဘိုင်း အလွန်ကို မျက်စီရှက်လှတာကြောင့် ကွန်မန်းလေး ကပျာကယာရေးပြီး
ကျမက အရှက်မရှိလို ့ဝင်ကြည့်ပါတယ်. ဘီကီနီ ဘဲ သီးသန် ့ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်လို ့ထင်ပါတယ်. အဝတ်အစား ကို နေရာဒေသလိုက်ပြီးဝတ်တာ ကြိုက်ပါတယ်. လူတစ်ယောက်က တခြားတယောက်ကိုရွံစရာဆိုတဲ့အမြင်ကို လက်မခံနိုင်ပါ. လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲကြည့်တာပါ.
ကျမတို ့ရုံးမှာ ဘီကီနီ နဲ့Calender တွေ Supplier တွေကပေးတာ.. ဟီး ကျမ မှာတော့ရှိဘူး မတောင်းကြနဲ ့.
အောင်မလေးဗျာ မဆိုစကောင်း ဆိုစကောင်း တောက်တဲ့ ခေါင်းပေါင်းပေါင်း
အင်း ကိလေသာ..တဏှာ များ တယ်လဲကြောက်စရာကောင်းပါလား
အင်း.. အပုတ်ကောင် အပုတ်ကောင်..
အာ … ဥဥ … ဘာတွေလာပြနေတာတုန်း .. ရှက်…ချာ … ကြီး .. ဟီး ဟီး …
ရေဗူးတင်မက ရေခွက်ပါသွားယူထားလိုက်တယ် … သရေကျလာရင် ရေခွက်နဲ့ခံလို့ရအောင်
သူ့ကိုယ်သူ မြန်မာလို့ ခံယူပုံမရဘူး… နာမည်လေးကတော့ နန်းသိရိမောင်တဲ့။ ကိုယ့်နာမည်တောင် ကိုယ်အားမနာဘူး……..။
ဓာတ်ပုံ ကို ဓာတ်ပုံ လို့ပဲ ကြည့်ပါတယ်ဗျာ . . ဦး ဋ္ဌေးဝင်း၊ ကိုဖူဂျီ၊ ကိုလမင်းနိုင် တို့ လက်ရာ တွေ နဲ့ သူ နဲ့ တွေ့တော့ . . . . . ပါးစပ် အဟောင်းသား ကိုဖြစ်လို့ ဗျို့. . . . . .။ သူများ under water ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး . . . . အင်း ………. ရေလုံအိတ်အစွတ် တစ်ခုလောက် တော့ လိုချင်မိသား . . . . .